Ruzivo rwekurima nePrime Seed Co
You are at:Home»NHAU DZEVARIMI»Ruzivo rwekurima nePrime Seed Co
By Muchaneta Chimuka on	 December 1, 2017 · NHAU DZEVARIMI
KAMBANI ine mukurumbira pakuuchika mbeu dzemuriwo nemaruva, yePrime Seed Co iri kusimudzira mabasa ekurima munyika kuburikidza nekudzidzisa varimi, vatsigiri nevatengesi kurima kwakanaka kumuzinda wayo uri kuStapleford Research Station pedyo neHarare.
Vachitaura pazuva rekuparurwa kwechirongwa ichi nemusi weChipiri svondo rino, munyori mukuru kubazi rezvekurima nekusimudzirwa kwemadiridziro, VaRingson Chitsiko, vanoti kusimukira kwenyika kunobva mukurima.
“Makanzwa pakagadzwa mutungamiriri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa neChishanu svondo rapera vachiti upfumi hwenyika hunobva mukugona kurima, saka aya ndiwo mamwe emabasa atinofanira kunge tichisimbaradza kuti tibudirire.
“Kurimwa kwemiriwo nemaruva ibhizimusi rine mari, riri panhamba yepiri kutevera chirimwa chefodya izvo zvinoita kuti tiwane mari yekunze. Hakuna chimwe chirimwa chinopinda kurimwa kwemiriwo nemaruva uye zvinoita kuti minda inge ichishandiswa nemazvo,” vanodaro.
VaChitsiko vanotenda kambani yePrime Seed Co nekusimudzira kurimwa kwemiriwo nemaruva munyika vachiti zvirongwa zvakadai zvinoita kuti mabasa avepo uye nekusimudzira utano hwevanhu.
“Ndinofara zvikuru varimi vazhinji vauya kuzodzidza kurima kwakanaka. Tinoda kuti Zimbabwe ivewo pamberi mukutengesa mbeu dzemiriwo nemaruva kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa, Malawi, kuAsia nedzimwe,” vanodaro.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, VaWillie Ranby, avo vanova managing director wePrime Seed Co vanoti pabindu ravo iri vanorima zvirimwa zvinosanganisira broccoli, matomatisi, makabhichi, makarotsi, bhinzi, hanyanisi, magaka, lettuce, mhiripiri, mabhatanati nezvimwe.
“Tine mbeu dzemhando yemiriwo yose, tiri kubura dzimwe mhando itsva dzinoita kuti varimi vawane goho guru uye risingakasiki kuipa pamusika. Tine mbeu dzinokasika kumera nekukasika kuibva, nokudaro murimi anorima kwegore rose achiita mari zviri nyore,” vanodaro.
VaMasimba Kanyepi, avo vanove sales manager (grains) kuPrime Seed Co vanokurudzira varimi kuti vatenge mbeu dzakauchikwa pane kushandisa zvirimwa zvavo sembeu.
“Varimi vemiriwo nemaruva tinovakurudzira kuti vasashandise maopen pollinated varieties dzinova mbeu dzisina kuuchikwa nekuti hadzipe goho guru. Mbeu dzakauchikwa dzinogara kwenguva refu dzisina kupfukutwa uye zvirimwa zvinobuda zvinenge zviri zvemhando yepamusoro zvisingakasiki kubatwa nezvirwere kana kudyiwa netwumbuyu,” vanodaro.
Vanotizve pachirongwa ichi, vakakoka vanoona nezvekutengeserana, vemaindasitiri anoona nezvekugadzirwa kwezvinhu kubva muzvirimwa zvavo akadai seBest Fruits Processors, Sweppes, vatsigiri nevarimi.
Prime Seed Co ibandiko kana kuti rimwe remapazi ekambani ine mukurumbira pakuuchika mbeu, yeSeed Co.